Aquarium water clarifier: ကြည်လင်သန့်ရှင်းသောရေရှိရန်အကောင်းဆုံး ငါးများ
ငါးပြတိုက်ရေသန့်စက်သည်ရေကိုသန့်ရှင်းစေရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည် ပြီးတော့ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကငါတို့ငါးတွေကိုသေစေနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာရှိသော်လည်းဤထုတ်ကုန်များသည်မြန်ဆန်ပြီးသုံးရအလွန်လွယ်ကူသည်။
ထိုကွောငျ့, ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးပြတိုက်၏ရေသန့်စက်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပြသည့်အပြင်၎င်းအကြောင်းပြောလိမ့်မည်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည် (သို့) အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်၊ သင်၏ရေကိုသန့်ရှင်းစေရန်လှည့်ကွက်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းရေသည်ငါးပြတိုက်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်ဤအခြားဆောင်းပါးများအကြောင်းဖတ်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ငါးပြတိုက်ရေအေးစက် o ငါးမွေးကန်များတွင်အသုံးပြုရန်ရေ.
5.2 လိုအပ်ချက်များ (ကိုယ်ပိုင်နှင့်ငါးပြတိုက်)
6 ငါးမွေးကန်ထဲမှာကြည်လင်တဲ့ရေရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လှည့်ကွက်
JBL Clearol - ကုသမှု ...
Tetra CrystalWater ၁၀၀ မီလီလီတာ ...
ငါးပြတိုက်ရေသန့်စက်သည်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သောအရည်ဖြစ်သည် သင်၏ငါးပြတိုက်၏ရေ၌ရေ၌ပါရှိသောအမှုန်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းသည် "တိမ်" ကိုဖြစ်စေသည်။ ဤအမှုန်များသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရေထဲသို့ ၀ င်နိုင်သည်။
La overfeedingသင်၏ငါးများသည်ရေထဲသို့အရည်ပျော်သွားစေသောအရာ (ဤအခြေအနေတွင်ဖန်ခွက်သည်အေးခဲသွားလိမ့်မည်) ။
El အမှုန့် အဲဒါကကျောက်စရစ်ကိုစွန့်ပစ်တာ။
အ ရေညှိ (ငါးပြတိုက်သည်စိမ်းစိုသောထိတွေ့မှုရှိလျှင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ ) အလင်းရောင်များလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အာဟာရဓာတ်များလွန်းခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းအမျိုးမျိုးမှကြီးထွားလာနိုင်သည်။
ရောက်ရှိခြင်း သတ္တုဓာတ် ဖော့စဖိတ် (သို့) သံကဲ့သို့ရေ၌ပျော်။ ရေသည်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်သန်းလာလိမ့်မည်။
မဆို ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း သူ၏သုတ်ဆေးသည်တဖြည်းဖြည်းအရောင်ဖျော့လာသည်။
ဖုန်မှုန့်ခံစားမှုသည်လူတစ် ဦး ကြောင့်ဖြစ်ရသည် filtration စနစ် ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ (မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်ရေကိုသန့်ရှင်းပြီး filter system ကိုပြုပြင်ရမည်) ။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကတည်းကအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည် ဤအရည်သည်အဘယ်အရာကရေကိုညစ်ပတ်စေသောအမှုန်များကိုစုစည်းစေသောဓာတုတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည် ၎င်းတို့သည်ငါးပြတိုက်၏အောက်ခြေတွင်ရှိနေရန် (သို့) ဇကာဖြင့်ပိတ်မိနေရန်လုံလောက်သည်။ ရေကိုသန့်စင်ရန်နာရီအနည်းငယ်သာကြာသောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတတ်နိုင်ဆုံးမြန်ဆန်သည်။
သတိရပါ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရရန်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအမြဲလိုက်နာသင့်သည်မရ။ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီသည်တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်သောက်သုံးသောအရာရှိသည်။
သေချာကြည့်သင့်ပါတယ် ရေညှိနှင့်အပင်များကိုကုသပေးသည် ပြီးတော့မင်းသုံးမယ့်ထုတ်ကုန်ကသူတို့အတွက်လုံခြုံတယ်။ သင်သူတို့ကိုကုသလိုလျှင်၊ ရှင်းလင်းချက်မသုံးမီ ၂၄ နာရီစောင့်ပါ။
adjusts ရေ၏ PH မှာ ၇.၅ ဖြစ်သည်.
ထုတ်ကုန်ထိုးဆေးကိုမှီဝဲပါ ညွှန်ပြသောရေတစ်လီတာလျှင် (အများစုကမင်းမီတာအဖုံးကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုပေးပြီးရေရဲ့လီတာနဲ့ဆေးပမာဏကိုထည့်တွက်ဖို့) သင်ရေထဲမျောပါသွားပါကငါးကိုထိခိုက်စေခြင်းသို့မဟုတ်သေစေခြင်းနှင့်ရေကိုပိုညစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။
filter ကို run ထားလိုက်ပါ ရေသည်သန့်ရှင်းသည်အထိ
အချို့ထုတ်ကုန်များကရေကိုလုံးဝသန့်ရှင်းသည်အထိဆေးကိုထပ်ခါတလဲလဲခွင့်ပြုသည် ဆေးများအကြား ၄၈ နာရီလွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာရန်လိုသည်.
ပုံမှန်အားဖြင့်ရေသန့်စက်များသည်ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်သော်လည်းအတော်လေးမြန်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်aပျမ်းမျှ ၇၂ နာရီ (ဆိုလိုသည်မှာသုံးရက်) ကြည်လင်သန့်ရှင်းသောရေရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ရေသန့်စက်များသည် အတော်လေးတိကျသောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားဒါပေမယ့်သူတို့မှာမော်ဒယ်တွေအများကြီးရှိလို့မင်း ၀ ယ်တဲ့အခါထည့်စဉ်းစားရမယ့်သတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါတို့ကိုစဉ်းစားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ရှင်းလင်းချက်အချို့ရှိသည် ရေချိုငါးပြတိုက်များအတွက်သာသင့်တော်သည်အခြားသူများသည်အထူးသဖြင့်စိုက်သို့မဟုတ်ရေငန်ငါးပြတိုက်များကိုအထူးရည်ရွယ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ အချို့သည်စစ်ထုတ်မထားသောရေ၌အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်အမှုန်များကို၎င်းတို့ကိုထောင်ချောက်တွင်ထောင်ချောက်ဆင်ရန်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောငါးပြတိုက်အမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများကိုဝက်အူများနှင့်မတင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
တကယ်တော့, ရေကန်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပင်ရှာဖွေနိုင်သောရှင်းလင်းချက်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်ရာသီအလိုက် ...
အလားတူပင် ငါတို့ကငါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ် ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါးပြတိုက်တွေပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကိုရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုပြည့်စုံသောအရာများအတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကမ်းလှမ်းမှုရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းလျှင်စိတ်ကူးကောင်းရနိုင်သည်။ အပိုအကူအညီလိုသည်။
ဒါ့အပြင်၊ အခြားတစ်ခုထက်ပိုမြန်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်၊ အရေးပေါ်တစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ရေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခါအားလျော်စွာသတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။
အလားတူပင် စျေးနှုန်းသည်ငါတို့ရှာဖွေသောအရာကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မရ။ ရိုးရှင်းသောရှင်းလင်းချက်များသည်စျေးပိုသက်သာသည်၊ အခြားအပိုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်ထက်စျေးပိုရှိသည်။ အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုကဘာမဆိုမ ၀ ယ်ခင်ငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုတွက်ချက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
သင်၏ငါးပြတိုက်၌ရေကိုသန့်ရှင်းကြည်လင်စွာထားရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်၊ ၎င်းသည်အတွဲလိုက်လိုအပ်သော်လည်းမခက်ခဲပါ သင်မကြာခဏလုပ်ရမည့်ထပ်တလဲလဲအလုပ်များသို့သော်၎င်းသည်သင်၏ငါးများ၏အသက်တာအပေါ်အလွန်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်:
စောင့်ရှောက်လော့ လုံလောက်သောငါး ဦး ရေ- အများကြီးမထားပါနှင့်၊ ငါးပြတိုက်သည်ပိုမိုညစ်ပတ်လာသည်။
သွားလုပ် ရေသည်ပုံမှန်ပြောင်းသည် (ဥပမာအပတ်စဉ်ရေ ၁၀ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း)
သေချာအောင်လုပ်ပါ filter system သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည် လိုအပ်လျှင်သန့်ရှင်းပါ။
မဟုတ်ဘူး၊ လိပ်တွေနဲ့ငါးပြတိုက်တစ်ခုမှာရှင်းလင်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနဲ့။ ဤထုတ်ကုန်များသည်အခြားမျိုးစိတ်များကိုထိခိုက်စေနိုင်သောငါးများအတွက်သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငါးပြတိုက်အသစ်တစ်ခုကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးပြီဆိုလျှင်၊ ရေသည်မကြည်လင်ဘဲညစ်ပတ်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်မရ။ သို့သော်ဤအခြေအနေများတွင်ဂေဟစနစ်သည်၎င်း၏အခြေအနေအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိနေပါသည်။ ငါး၊ အစာ (သို့) အပင်ကဲ့သို့နေရာများမှလာသောဘက်တီးရီးယားများကဲ့သို့အဏုကြည့်ဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ရေသည်မကြည်လင်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်တီးရီးယားများအခြေချပြီးသည်နှင့်ရေသည်ကြည်လင်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ငါးပြတိုက်အသစ်ရှိလျှင်ရေကြည်ကဲ့သို့သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများမထည့်ခင်တစ်ပတ်စောင့်ရန်အကြံပြုသည်။
ငါးပြတိုက်ရေသန့်စက်ကောင်းတစ်ခု ရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်တခါတလေငါတို့သွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးမော်ဒယ်တွေပိုများလာတယ်၊ ဥပမာ
En အမေဇုံသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး၊ ငါတို့ကအကြီးမြတ်ဆုံးမော်ဒယ်မျိုးစုံကိုရှာရမယ့်နေရာမှာ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအရမ်းတိကျတဲ့တံဆိပ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကိုလိုချင်ရင်အဲဒါကအရင်ကြည့်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးနေရာဘဲ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင် Tetra, JBL, Flubal, Seachem ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးရှိသည်။
En အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်များ Kiwoko နှင့် Zooplus ကဲ့သို့သင်များစွာသောအရာများအားသင်ရှာဖွေမည်ကိုသိသည်ဖြစ်စေ၊ သင်အကူအညီလိုသည်ဖြစ်စေထောက်ခံသည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်အလွန်သင့်တော်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောအရာသည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များသို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရေရှည်တွင်သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်သောစိတ် ၀ င်စားစရာအစီအစဉ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းမှုများရှိတတ်သည်။
သွားရမည် ဌာနစတိုးဆိုင် Leroy Merlin ကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သေးငယ်သည့်အပိုင်းရှိသည့်အတွက်သင်သည်သက်ရှိမရှိသောရေကူးကန်များ (သို့) ရေကန်များကိုရည်ရွယ်ထားသောအရာများထက်ပိုမိုရှင်းလင်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါးပြတိုက်သုံးရေသန့်စက်၏တိကျသောနည်းလမ်းနှင့်ရေကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးခဲ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်မှ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများအတွက်ပိုမိုလှပပြီးသာယာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ၊ သင်ရှင်းလင်းချက်ကိုသုံးဖူးသလား။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အားသီးခြားအမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်ထောက်ခံပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ပစ္စည်းများ » ငါးပြတိုက်ရေသန့်စက်